बिज्ञान प्रबिधि Archives - Page3of 11 - Taja Report
३८ वर्ष पछि आज यस्तो खास नागपंचमी मनाइदै,नागपंचमीको दिन यसरी गर्नुहोस् पुजा….
August 16, 2018 Comments Off on ३८ वर्ष पछि आज यस्तो खास नागपंचमी मनाइदै,नागपंचमीको दिन यसरी गर्नुहोस् पुजा….
नागपंचमी श्रावण मासको शुक्ल पक्षमा पंचमीको दिन मनाइने गरिन्छ। ज्योतिषाचार्य पं प्रफुल्ल भट्टको अनुसार यो वर्ष उदय कालिक कुंडलीमा राह-केतु कर्कोटक नामको पूर्ण कालसर्प योग बन्ने जसको कारण नाग्पंचामीको महत्व झन् बढ्नेछ। कसैको कुंडलीमा कालसर्प [ पुरा पढ्नुहोस ]
लक्ष्मीलाई के के चढाएर खुसी पार्न सकिन्छ ?
August 15, 2018 Comments Off on लक्ष्मीलाई के के चढाएर खुसी पार्न सकिन्छ ?
हिन्दु धर्ममा लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनिन्छ । सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, सम्पन्नता र सुन्दरताको अर्थमा पनि लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुने गर्दछ। लक्ष्मीको पुजा गरे धनी भइने जनविश्वास रहेको छ । यहाँ लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने ७ तरिकाहरु [ पुरा पढ्नुहोस ]
घरमा भित्र्याउनुहोस् यी ९ चिज, चम्किने छ भाग्य, के के हुन् त ति चिज :: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस ।
August 15, 2018 Comments Off on घरमा भित्र्याउनुहोस् यी ९ चिज, चम्किने छ भाग्य, के के हुन् त ति चिज :: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस ।
हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ की पूरा वर्ष खुसीले भरियोस्। धन सम्पत्ति आदी कुराको कहिलै कमी महशुस नहोस्। यदी तपाई पनि यही चाहना राख्नु हुन्छ भने केही यस्ता चिजका बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी गराउँदै छौँ। [ पुरा पढ्नुहोस ]
अन्तरीक्षबाट खस्ने ढुंगाले पृथ्वी ध्वस्त पार्नसक्ने वैज्ञानिकको चेतावनी:: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस ।
August 14, 2018 Comments Off on अन्तरीक्षबाट खस्ने ढुंगाले पृथ्वी ध्वस्त पार्नसक्ने वैज्ञानिकको चेतावनी:: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस ।
नासाका वैज्ञानिकहरुले अब आउने शताब्दीमा अन्तरीक्षबाट भयनाक ढुंगा पृथ्वी तर्फ आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले उक्त भयानक ढुंगा आकारमा अत्यन्त ठूलो भएका कारण हालसम्मका वैज्ञानिक उपकरणहरुले रोक्न सकिने सम्भावना कम भएको बताएका छन् [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 13, 2018 Comments Off on आज साउनको अन्तिम सोमबार, देशभरका शिवालयमा घुइँचो
२८ साउन, काठमाडौं । आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार, पशुपतिनाथसहित देशभरका शिवालयहरुमा श्रद्धालुहरुको भिड लागेको छ । साउन महिनाको हरेक सोमबार ब्रत बसेर शिवको पूजा गर्दै आएका महिलाहरुले आज विधिपूर्वक व्रत समाप्त गर्दछन् । साउनको सोमबार [ पुरा पढ्नुहोस ]
१२ ज्योतिर्लिंग नेपालमै : पहिलोपटक तथ्य पत्ता लाग्यो, कहाँ कहाँ छन् ?
August 12, 2018 Comments Off on १२ ज्योतिर्लिंग नेपालमै : पहिलोपटक तथ्य पत्ता लाग्यो, कहाँ कहाँ छन् ?
काठमाडौँ । सत्ययुगमा धपधपी बल्ने विश्वास गरिएका शिवजीका बाह्र लिंग नेपालमा फेला परेका छन् । नेपाली १२ ज्योतिर्लिंग दर्शनार्थ भारतका विभिन्न स्थानमा धाउँदै आएका छन् । भगवान् शिव (शंकर) का साक्षात् अवतार भएकाले ज्योतिर्लिंगको दर्शन [ पुरा पढ्नुहोस ]
आज राति उल्कावर्षा हुँदै : प्रतिघण्टा ६० देखि १ सयसम्म उल्का खस्ने अनुमान
August 12, 2018 Comments Off on आज राति उल्कावर्षा हुँदै : प्रतिघण्टा ६० देखि १ सयसम्म उल्का खस्ने अनुमान
काठमाडाैं । आज राति अाकाशमा उल्का वर्षा हुँदै छ । रातिदेखि भोलि बिहानसम्ममा उल्कापात हुने र प्रतिघण्टा ६० देखि एक सयसम्म उल्का खस्ने अनुमान गरिएको छ । केही समयअघिदेखि नै उल्का खस्ने क्रम जारी रहे तापनि आज [ पुरा पढ्नुहोस ]
पशुपति मन्दिरको चतुर्मुखी शिवलिंगको रहस्य यस्तो छ
August 11, 2018 Comments Off on पशुपति मन्दिरको चतुर्मुखी शिवलिंगको रहस्य यस्तो छ
पशुपतिनाथ भगवान् शिवकै एक स्वरूप हो । भगवान् शिवको यो धाम यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा रहेको छ । हिन्दू धर्मको आठ सबभन्दा पवित्र स्थलमध्ये एक पशुपतिनाथ पनि हो । नेपालबाट मात्र नभई भारत तथा [ पुरा पढ्नुहोस ]
वास्तु शास्त्र अनुसार घरमा राख्दै नराख्नुस यि ६ चिज ! :: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस ।
August 11, 2018 Comments Off on वास्तु शास्त्र अनुसार घरमा राख्दै नराख्नुस यि ६ चिज ! :: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस ।
मानव जिवनमा अति अावस्यकीय चिज मध्ये घर प्रमुख हाे । इच्छा र सपना अनुसार अाफु बस्ने घर के कस्ताे बनाउने हाे त्याे कल्पना गरी या चित्रण गरी बनाइन्छ । घर बनाइसकेपछि बिभिन्न सजावटहरू सुरू गरिन्छ [ पुरा पढ्नुहोस ]
वास्तुशास्त्रका अनुसार यस्तो समयमा गरेको कामले शुभ फल दिन्छ ::पूरा पढ्नु होस ।
August 11, 2018 Comments Off on वास्तुशास्त्रका अनुसार यस्तो समयमा गरेको कामले शुभ फल दिन्छ ::पूरा पढ्नु होस ।
यदि शास्त्रलाई मान्ने हो भने हाम्रो जीवनमा वास्तुशास्त्रले एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । केही यस्ता उपाय जसले तपाई आफ्नो जीवनलाई सहज र शुभ बनाउन सक्नुहुन्छ । सुर्यले वास्तुशास्त्रलाई प्रभावित गर्छ, त्यसैले सुर्यअनुसार नै हामी भवन [ पुरा पढ्नुहोस ]